आयुष्मान र शिल्पा यो कस्तो प्रेम ? ‘सानो मन’ गीत « Mazzako Online
आयुष्मान र शिल्पा यो कस्तो प्रेम ? ‘सानो मन’ गीत
अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी र अभिनेत्री शिल्पा मास्के अभिनित फिल्म ‘सानो मन’ को टाईटल गीत रिलिज गरिएको छ । यसअघि सार्वजनिक ‘रानो कम्मर’ बोलको गीत र ट्रेलरले मज्जाको प्रतिक्रिया पाइरहेको अवस्थामा निर्माण टिमले टाईटल गीत रिलिज गरेको हो । गीतमा सुयोग सोताङ्गको संगीत, रोहित जोन क्षेत्रीको स्वर तथा स्वप्निल शर्माको शब्द छ । गीतमा आयुष्मान र शिल्पाको मज्जाको प्रेमलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुयोग गुरुङ्ग निर्देशित फिल्म असार २० बाट अलनेपाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्ममा आयुष्मान शिल्पासंगै सक्षम सुवेदी, गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल, रश्मी भट्ट, देव कुमार श्रेष्ठ लगायतको अभिनय छ । समिर सुनवार र निर्देशक गुरुङको संयुक्त लेखन रहेको फिल्मलाई आलोक शुक्लले काठमाडौं, भैरहवा, बैंकक लगायतका ठाउँमा छायांकन गरेका हुन् ।
ओ.पि.जी फिल्मस्, ए प्लस इन्टरटेन्मेन्ट र हाई टेक इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त ब्यानरमा फिल्म निर्माण भएको हो । सुयोग गुरुङ र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको फिल्मको भिएफएक्स नगेश कँडेलले गरेका छन् । फिल्मका निर्माताहरू योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के. मित्तल र राजेन्द्र मानन्धर हुन् ।